छोराको होइन सन्तानको खाँचो होस् | News Nepal
सरस्वती पाण्डे/लीलाकुमारी अर्यालले मंसिर २ गते एक राष्ट्रिय दैनिकमा ‘मेरो कोख चिहान होइन’ भन्ने शीर्षकको लेखले मेरो मन छोयो । दोहो¥याई–दोहो¥याई पढेँ । त्यसपछि मलाई केही लेख्न मन लाग्यो । छोरा र छोरीप्रति गरिने भेदभाव परापूर्वक कालदेखि स्थापित हुँदै आएको छ। पहिले खुल्ला रूपमा भेदभव गरिन्थ्यो । अहिले पनि यो रोकिएको छैन । पहिलो सन्तान छोरी हुनेहरूलाई अर्को सन्तान छोरा हुनुपर्छ र होस् भन्दै महिलालाई नै दवाब दिने प्रचलन जहाँतहीँ छ।
पुरातन विचारधाराका मानिहरूले भन्दा त पचाउन सकिन्छ तर नयाँ विचारधाराको हुँ भन्दै आडम्बरीरूको मानसिकतामा डढेलो लागेको देख्दा मथिंगलका ज्वारभाटाले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मुटु छेड्ने गरी हान्न मन लाग्छ । कोखमा हुर्किन लागेको सन्तान छोरी हो भन्ने थाहा पाए पछि कैंची चलाई उसको अस्तित्व मेटाउने कार्य बाबुबाट मात्र होइन आमाहरूबाट पनि हुँदै आएको छ । समाजमा देखिन्छ । सुन्ने गरिन्छ ।
कोही बाध्यताता परेर आफ्नो गर्भलाई रुँदै तुहाउने तर अधिकांश रूपमा सहमति गरेर कोखलाई महिनैपिच्छे चिहान बनाउनेको जमात अनगिन्ती छन्। सन्तानको पीडामा तड्पिने जमातको ब्यथा छुट्टै छ । पंतिकारलाई लाग्छ-यस धर्तीमा जन्मिएका कोही पनि आमा र बाबु हुनबाट बञ्चित हुन नपरोस् । इच्छा हुँदाहुँदै पनि कोख र मन रित्तो भएका अनेक रुढिवादी व्यवहार सहन बाध्य भएका हृदयहरूलाई सहानुभूति बाहेक केही गर्न सकिंदैन । तर क्षमतावान् ती व्यक्तिहरू जसले आफ्नो यौनरसको गलत तरिकाले प्रयोग गरेर आफ्नै कोखलाई प्रहार गरेको देख्दा मन अमिलो हुन्छ । दिक्क लाग्छ ।
छोराछोरीबीचको भेदभाव अशिक्षितभन्दा शिक्षितबाट भएका छन् । छोरी घरमा हुँदाहुँदै छोराको लागि कोखमा कैंची लगाएको ती घरमा भएका छोरीहरूले थाहा पाए भने कस्तो असर पर्ला र थाहा पाएकोको मस्तिष्कमा कस्तो छाप परेको होला ? यस विषयमा ती कैंचीवाज आमाबाबुले सोचेका छन् ? बिबाहित दम्पतीलाई छोराको होइन सन्तानको खाँचो होस् ।छोरीले पनि उत्तिकै भूमिका पूरा गर्नेछन् जति छोराहरूले गरेका छन्। हरेकले बलत्कारी छोरा जन्मिनुभन्दा इमान्दारी छोराछोरी जन्मिनुमा गर्व गरुन् ।